ठेकेदार सम्पर्कविहीन, बत्ती बाल्ने आशमा बित्यो तीन वर्ष - २९ आश्विन २०७७, NepalTimes
ठेकेदार सम्पर्कविहीन, बत्ती बाल्ने आशमा बित्यो तीन वर्ष
२९ आश्विन २०७७
२९ असाेज, हुम्ला ।
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका वडा नं ८ स्याँडाका नागरिकलाई ठेकेदारले बत्ती बाल्ने सपना देखाएको तीन वर्ष बितेको छ । लामो समयदेखि ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण हालसम्म पनि बत्ती नबलेपछि स्याँडा गाउँका २४७ घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् ।
बिजुली बाल्ने बहानामा ठेकेदार तेजबहादुर महतले स्थानीयवासीलाई बिजुलीका खम्बा बोकाएर ज्याला भने हालसम्म नदिएको वडाध्यक्ष चक्र बुढाले बताए । गाउँ नजिकको अर्को गाउँ माजसम्म बिजुलीका ३५ खम्बा पुगेको र ठेकेदार महतले जम्मा रु ८० हजार निकासा दिई बाँकी नदिएर सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ ।
गाउँमा बत्ती बाल्नका लागि वडा नं ८ स्याँडा कार्यालयले रु आठ लाख छुट्टयाएको भए तापनि सदुपयोग नभएर खेर गएको छ । कार्यालयले गाउँबासीलाई निशुल्क मिटरबक्स दिनका लागि रु आठ लाख छुट्याए पनि रु चार लाख खम्बामा खर्च भएको र रु चार लाख उपभोक्ताका खातामा बाँकी छ कि खर्च भयो भन्ने थाहा नभएको वडाध्यक्ष बुढाले बताए ।
विसं २०७४ मा हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजना बिजुली पुर्याउने प्रक्रियामा लागे तापनि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बिजुली नबलेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । विसं २०७५ मा पूर्वगाविस सचिवको कार्यकालमा स्याँडा गाउँलाई बत्ती बाल्ने भनेर रकम छुट्याइए पनि ठेक्काको जिम्मा लिएका ठेकेदारले काम पूरा गर्न नसकेको स्थानीयवासीले बताका छन् ।
दुवै क्षेत्रबाट सो रकम उपलब्ध नहुँदा सोही गाउँका ज्याला मजदूरी गर्ने व्यक्तिले सो रकम नपाएको स्थानीयवासी किरण बुढाले गुनासो गरे । स्थानीय बुढाका अनुसार त्यतिबेला सिमकोटको लाक्नाबाट १२ स्थानीयवासीले २० खम्बा बोकेर गाउँ पु¥याएका थिए । “ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण गाउँमा नत बत्ती बल्न सक्यो, न त काम गरेको ज्याला नै पाइयो”, किरणले भने ।
बेलाबेलामा ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा ठेकेदारले फोन रिसिभ नगरेको उनको गुनासो छ । अहिले स्याँडा गाउँ बत्ती नबल्दा अन्धकारमय बनेको छ । खम्बा ओसारेका १२ कामदारले करीब रु पाँच लाख बराबर ज्याला पनि पाएका छैनन् । यतिखेर सो ठाउँका लागि राखिएका तार र खम्बा पनि बीचैमा लथालिङ्ग छन् ।
सम्बन्धित ठेकेदारलाई पुनः एक पटक अनुरोध गर्ने तर नमानेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजूरी दिइने किरणले चेतावनी दिए । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा ठेकेदार महतसँग सम्पर्क हुन सकेन । रासस
मिलापत्रमै टुंग्याइन्छ बलात्कारका घटना
ओली, प्रचण्ड र नेपाल शक्ति सञ्चय गर्न गुटगत भेलाको तयारीमा
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग : डीपीआर बनाउन चीन सकारात्मक
नेप्सेमा नयाँ ब्रेकः सातामा ३१ अर्बको कारोबार
नयाँ नक्सा र कालापानी–सुस्ता विवादबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबीच छलफल गर्ने समझदारी
१२ दिनसम्म देखाइने कार्तिक नाच दुई दिनमा सीमित
नेकपा विवादः टुट्यो ओली र दाहालबीचको संवाद
कोरोना संक्रमणको अवधि लम्बिँदै, १४ दिनपछि नियमित काममा निस्कन सक्ने सुुझाव
बागमती प्रदेशमा धान उत्पादन बढ्यो, उत्पादकत्व घट्यो
बेलायतले निर्माण गरिरहेको कोरोना विरुद्धका खोपमा केही तथ्यगत खराबी देखियो
नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउन राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीलाई सन्देश: ‘सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गरौँ’
नेपाली भूभाग डुबाउने गरि भारतले कोशीको पानी चलाउने
प्रहरी समायोजन : नेपाल प्रहरीमा कति ? प्रदेशमा कति ?
प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेश सचिवको शिष्टाचार भेट
कोरोनाको भ्याक्सिनमा नेपाललाई सहयोग गर्ने भारतीय विदेश सचिवको प्रतिवद्धता
संवैधानिक आयोग रिक्त हुनुको दोष सरकारलाई नदिनु : परराष्ट्रमन्त्री
सचिवस्तरीय वार्तापछि हर्षवर्धनले भने – छलफलको राम्रो सुरुवात
कोरोना अपडेटः थप २३ संक्रमितको मृत्यु, थपिए १,६१४ नयाँ संक्रमित